ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေကို အားပေးထောက်ပံ့မှုတွေ ပြုလုပ်နေသလို CDM မှာပါဝင်ပေးကြတဲ့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေကို နောက်အပတ်မှာလည်း ရုံးမတက်ကြပါနဲ့ဦးလို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုက်တဲ့ ဖွေးဖွေး – Cele Posts
လက်ရှိ မြန်မာပြည်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး မငြိမ်မသက်ဖြစ်မှုအပေါ် ပြည်သူလူထုနဲ့ အတူတူ အနုပညာရှင် အချို့ကလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်လာပြီး ဆန္ဒပြဖော်ထုတ်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာလောကရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးမင်းသမီး တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သုံးထပ်ကွမ်း အကယ်ဒမီဆုရှင် ဖွေးဖွေးကလည်း နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေလျက်ရှိပြီး CDM မှာ ပါဝင်ကြတဲ့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက် အားပေးကူညီဖေးမပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၉) ရက်နေ့ မှာလည်း ဖွေးဖွေးက LGBT တွေနဲ့အတူတူ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး CDM မှာပါဝင်ပေးကြတဲ့ ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းတွေကို နောက်အပတ် မှာလည်း ရုံးမတက်ကြပါနဲ့ဦးလို့ မေတ္တာရပ်ခံ လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဖွေးဖွေးက “CDMers = HEROES !!! ❤️🌹💪🏻✨နောက်တပတ်လည်း ရုံး မတက်ကြပါနဲ့ဦး ! CDM ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေဘက်မှာ ကျွန်တော်/ကျွန်မတို့ အားလုံး ရှိပါတယ် !! အခု ​ကြောက်​နေရင် ​နောက်မျိုးဆက်​တွေ ​ခေတ်အဆက် ဆက် ​ကြောက်သွားရလိမ့်မယ်!!! အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်!!!!!!” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာကနေလည်း တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ဖွေးဖွေး ကတော့ CDM မှာပါဝင်ပေးကြတဲ့ ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းတွေကို နောက်အပတ် မှာလည်း ရုံးမတက်ကြပါနဲ့ဦးလို့ မေတ္တာရပ်ခံ လာသလို ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လည်း အားပေးထောက်ပံ့မှုတွေ ပြုလုပ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက္ပါတယ်နော်။
ပွညျသူ့ဝနျထမျးတှကေို အားပေးထောကျပံ့မှုတှေ ပွုလုပျနသေလို CDM မှာပါဝငျပေးကွတဲ့ ပွညျသူ့ဝနျထမျးတှကေို နောကျအပတျမှာလညျး ရုံးမတကျကွပါနဲ့ဦးလို့ မတ်ေတာရပျခံလိုကျတဲ့ ဖှေးဖှေး
လကျရှိ မွနျမာပွညျတှငျးမှာဖွဈနတေဲ့ နိုငျငံရေး မငွိမျမသကျဖွဈမှုအပျေါ ပွညျသူလူထုနဲ့ အတူတူ အနုပညာရှငျ အခြို့ကလညျး ပူးပေါငျးပါဝငျလာပွီး ဆန်ဒပွဖျောထုတျနကွေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အနုပညာလောကရဲ့ အအောငျမွငျဆုံးမငျးသမီး တဈယောကျဖွဈတဲ့ သုံးထပျကှမျး အကယျဒမီဆုရှငျ ဖှေးဖှေးကလညျး နိုငျငံသားတဈယောကျအနနေဲ့ ငွိမျးခမျြးစှာ ဆန်ဒထုတျဖျောနလေကျြရှိပွီး CDM မှာ ပါဝငျကွတဲ့ ပွညျသူ့ဝနျထမျးတှအေတှကျ အားပေးကူညီဖေးမပေးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကနေ့ ဖဖေျောဝါရီလ (၁၉) ရကျနေ့ မှာလညျး ဖှေးဖှေးက LGBT တှနေဲ့အတူတူ ဆန်ဒဖျောထုတျခဲ့ပွီး CDM မှာပါဝငျပေးကွတဲ့ ပွညျသူ့ ဝနျထမျးတှကေို နောကျအပတျ မှာလညျး ရုံးမတကျကွပါနဲ့ဦးလို့ မတ်ေတာရပျခံ လာတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ဖှေးဖှေးက “CDMers = HEROES !!! ❤️🌹💪🏻✨နောကျတပတျလညျး ရုံး မတကျကွပါနဲ့ဦး ! CDM ပွညျသူ့ဝနျထမျးတှဘေကျမှာ ကြှနျတျော/ကြှနျမတို့ အားလုံး ရှိပါတယျ !! အခု ​ကွောကျ​နရေငျ ​နောကျမြိုးဆကျ​တှေ ​ခတျေအဆကျ ဆကျ ​ကွောကျသှားရလိမျ့မယျ!!! အရေးတျောပုံ အောငျရမညျ!!!!!!” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျ စာမကျြနှာကနလေညျး တောငျးဆိုထားပါတယျ။
ဖှေးဖှေး ကတော့ CDM မှာပါဝငျပေးကွတဲ့ ပွညျသူ့ ဝနျထမျးတှကေို နောကျအပတျ မှာလညျး ရုံးမတကျကွပါနဲ့ဦးလို့ မတ်ေတာရပျခံ လာသလို ပွညျသူ့ဝနျထမျးတှအေတှကျလညျး အားပေးထောကျပံ့မှုတှေ ပွုလုပျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီး အားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုက်ပါတယျနျော။